Dingadingana any Sainte Marie : nailikilika ny Malagasy | NewsMada
Nilaza ireo Malagasy miisa 20, mivelona amin’ny fitrandrahana dingadingana (cocombre de mer) any amin’ny Nosy Sainte-Marie fa « tsy ara-dalàna ny fandroahana anay. Manana fahazoan-dalana avy amin’ny minisiteran’ny Jono sy ny harena an-dranomasina avokoa izahay, azo ampiasaina manerana an’i Madagasikara».
Navoitran’izy ireo koa fa nampivorian’ny ben’ny Tanànan’i Sainte Marie ireo mpanjono sy mpitrandraka ireo ary nangatahany vola mitentina 92 tapitrisa Ar fa hoe hanamborana biraon’ny kominina.
Azo adika ho kolikoly
“Tsy nandà ny handoavana io vola io izahay fa nangataka mba ho indroa miantoana, saingy tsy neken’ny ben’ny Tanàna, ka tojo amin’izao tadiaviny raràna tsy hitrandraka dingadingana any Sainte- Marie izao”, hoy ihany izy ireo.
Amin’ireo mpitrandraka malagasy ireo, tsy fanao koa ny fangataham-bola mivantana toy izany, fa tsy maintsy amin’ny alalan’ny hetra sy/na tramberim-bidy ny fandoavana ny volam-panjakana. Azo adika ho kolikoly ity hevitry ny ben’ny Tanàna ity.
Nomarihin’ireo Malagasy ireo koa fa “tsy nisy fampiasana tavoahangy araka ny nambaran’ny ben’ny Tanàna akory tao“.